Wafdi ka socda Dowlada oo ku wajahan Baydhabo. – Hornafrik Media Network
Wafdi ka socda Dowlada oo ku wajahan Baydhabo.
By Liibaan Nuur	 On Jan 15, 2019
Baydhabo (Hornafrik)-Maanta waxaa magaalada Baydhabo ee Gobalka Bay lagu wadaa inuu gaaro wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan.
Guddoomiye mursal ayaa magaalada baydhabo berri kaga qeyb galaya caleema saarka madaxweynaha bil ka hor loo doortay koonfur galbeed soomaaliya mr lafta gareen.
Magaalada baydhabo ayaa saakay waxaa ka soconaya u diyaar garowga soo dhaweynta wafdiga guddoomiye mursal uu hoggaaminayo iyadoona dhanka kale la sheegay in amniga magaalada baydhabo aad loo adkeeyay.
Laba maalin ka hor magaalada baydhabo waxaa la geeyay ciidamo ka tirsan koofiya casta villa soomaaliya ilaaliya kuwaa oo lagu sheegay inay adkeyn doonaan amniga goobta uu caleema saarka ka dhacayo maalinta berrita ah.
Madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya lafta gareen ayaa ka hor caleema saarkiisa waxa uu booqasho ku tagay magaalooyinka xudur iyo barraawe halkaasi oo kulamo kula qaatay odayaasha dhaqan iyo waxgaradka labada magaalo degan isagoona markaasi sheegay inuu kasaari doono al-shabaab deegaanada ay ka joogaan koonfur galbeed soomaaliya iyo inuu uguurayo maamulkiisa caasimadda rasmiga ah ee koonfur galbneed sooomaaliya ee barraawe.
Mr lafta gareen ayaa waxaa horyaalla shaqooyin fara badan oo ay ka sugayaan inuu wax badan ka qabto kuwaa oo ay ka mid ka yihiin dhibaatooyinka ay ka tirsanayaan shacabka deegaanadaasi ku nool al shabaab iyo abaaraha ku soo laa laabta intaba.
Maxkamad ku taala Kenya oo soomaali la soo taagay.